Uncle.MC | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Uncle.MC | Hlaing
Uncle.MC စားသောက်ဆိုင်ကို ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကန်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းသန့်ရှင်းသော နေရာထိုင်ခင်းများရှိပြီး အေးဆေးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်ရှိသောကြောင့် မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းများနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးစားသောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာဟင်းလျာများ၊ တရုတ်အစားအစာအမျိုးမျိုးကိုအဓိကထားရောင်းချပြီး အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ ကော့တေး၊ မော့တေး၊ အအေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Business Meeting များ၊ သီးသန့်အေးအေးဆေးဆေးစားသုံးလိုသူများအတွက် Private Room ၅ခန်းရှိပြီး၊ ဆိုင်သို့ ၃ခါနှင့်အထက်လာရောက်စားသုံးသော Customer များကို 10% Discount ရရှိနိုင်တဲ့ VIP Card ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
No.(4), Kan Street, Hlaing Tsp., Yangon.
အနီးအနား bu tar yone မှတ်တိုင် 8 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်